ဣသရလေ | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ဣသရလေ
အဲဂုတ္တုပြည်၌ပြီးတော့ Back ကိုခန့်ခရီးသွားလာ
အဲဂုတ္တုပြည်၌အရှိဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနေရာများကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အဓိကအားဖြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပိရမစ်၏. အဲဂုတ္တုပြည်၌လည်းအနောက်ဘက်တွင်နေထိုင်သောလူများအတွက် vacationing အစက်အပြောက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်လည်းကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်နေထိုင်သောလူဦး. ဒါကသူတို့ရဲ့အားလပ်ရက်တစ်ခုပညာရေးဆိုင်ရာတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းဖို့လိုလားသူတစ်ဦးကမိသားစုများအတွက်စုံလင်သောခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီး. အများဆုံးအားလပ်ရက်အစက်အပြောက်မတူဘဲ, မိဘများတစ်ကြိမ်နာရီများအတွက်အပန်းဖြေပန်းခြံမှာ၎င်းတို့၏ကလေးများ drop. အဲဂုတ္တုပြည်တစ်ဦးကခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးကိုမိသားစုအီးများအတွက်တစ်ဦးကခမ်းနားခရီးစဉ်ကိုခံစားနိုင်မယ့်ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ် ...
ဣသရလေ – The Pressures of Life
When people in Israel get together for the first time one of the first things they ask each other the origins of their family. It's quite common that someone will have, ဥပမာအားဖြင့်, an Iraqi father andaBulgarian mother. Traditions mingle andanew race is born.
ဣသရေလအမျိုးကိုဟိုတယ် – အကောင်းဆုံးသိမ်းလျှို့ဝှက်ချက်များ
ပဲရစ် Notre-Dame ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းမှာ 13 ရာစုမှနောက်ကျောစတငျနှင့်အနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်တွင် Gothic အဘိဓါန်အနုပညာရဲ့လက်ရာထဲကတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း.
ဂရန်းကေမန် Snorkeling: တစ်ဦးကဂရိတ်မိသားစုလှုပ်ရှားမှု
စျေးပေါ Las Vegas တွင်ဟိုတယ်
ဇိမ်ခံ Alaskan သင်္ဘောလူကြိုက်အများဆုံးခုနှစ်တွင်ကြီးထွားလာန